Café. Waiting. Love ( 2014 ) - Myanmar Asian TV
Taiwan Romance ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ …
အချစ်ဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကို ဖော်ကြူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါ …
” အားထူး” ဆိုတဲ့ လူငယ်လေး အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ….
ရှုံးနိမ့်မှုတွေ များပေမယ့် အရှူံးကိုရင်ဆိုင်ပြီး ဘ၀ကို ရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာကောင်းအောင် နေထိုင်ပုံတွေကို လူငယ်ဆန်ဆန်ပြကွက်တွေနဲ့ ဖော်ကျူးထားပါတယ် …
အခြားသော အကြောင်းအရာတွေကိုလဲ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဟာသနှော ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးပါ …
ဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ၀ှက်ဖဲတချက်ကို နောက်ဆုံးမှာထည့်ထားပေးပါတယ်ရှင့် …
အဲဒါ ဘာလဲဆိုတာတော့ ဇာတ်လမ်းလေးကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုခံစားပေးပါနော် ….
Rating အရ IMDb မှာ 6.5/10 ရရှိထားတဲ့ Taiwan ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ခုပါ …
Source : 1080p Blu-ray x264 DTS-WiKi
Soliddrive.co Myanmar700 MB Download Openload.co Myanmar700 MB Download
Trailer: Café. Waiting. Love ( 2014 )